Civic organizations to continue lobbying for Zimbabwe to be fairly treated on the diamonds international market
Local civic organisations say they will continue to lobby for zimbabwe to be fairly treated when trading its diamonds on the international market and will not allow detractors to discredit the country’s gems.
Resources Exploitation Watch Trust chairperson Mr Tafadzwa Musarara said his association is aware of some elements both in Zimbabwe and abroad who are still bent on soiling the country's image as the government seeks to assert its place on the world diamond market.
Mr Musarara said this in response to Centre for Natural Resource Governance director, Mr Farai Maguwu, who has sought to discredit the Zimbabwean delegation that was recently in Brussels attending the Kimberly process bi-annual plenary.
Mr Maguwu has over the years been fighting government by making unsubstantiated allegations of human rights abuses in Chiadzwa diamond fields in his bid to have the country’s gems blacklisted.
Mr Musarara, who was part of the Zimbabwean delegation in Brussels said as representatives of civic society they are unperturbed by such allegations and will continue to defend the interests of the country.